Amasu angama-20 e-Ecommerce Okwengeza Ukuthengiswa Kweholide | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Novemba 1, 2013 NgoLwesibili, Januwari 12, 2021 Douglas Karr
Abantu abaku Volusion bakhombisa i-a 20% ukwanda kokuthengiswa kwamaholide online ngamabhizinisi amancane kuya kwaphakathi naphakathi ku-inthanethi kule sizini!
Uthola kanjani okuningi kule sizini samaholide esibaluleke kakhulu ngaphandle kokushisa isabelomali sakho? Ngena emdlalweni ngohlelo oluqinile bese uthengisa, uthengise, uthengise. Sesizongena esikhathini esihle kakhulu sonyaka se-ecommerce. Volusion udale lezi zeluleko zokuthuthukisa impumelelo yakho.
Amakhadi ezipho - bonisa ngokugqamile amakhadi ezipho nezitifiketi zezipho ekhasini lakho eliyisiqalo bese ubenzela isigaba - ngaphezu kuka-2/3 wabathengi banikeze amakhadi ezipho ngonyaka odlule. Lapho uthumela amakhadi wesipho noma izitifiketi zomzimba, faka ibhokisi elihlotshisiwe elingasongwa futhi linikezwe njengesipho. Ungesabi ukukhokhisa okungeziwe ngalokhu.
Ukuhanjiswa Kwasebusuku - Hlinzeka abathengi ngomzuzu wokugcina ngokunikeza inketho yokuthumela ubusuku bonke kumakhasimende ukuze akwazi ukuthola iphakethe lawo ngokushesha. Tshela amakhasimende ekhasini lakho eliyisiqalo usuku lokugcina ngokuphelele abanga-oda ngalo bese besathola iphakethe labo ngesikhathi samaholide amakhulu. Buza kumhlinzeki wakho wokuthumela ukuze ubone ukuthi akhona yini amanani amasha noma wehlisiwe atholakalayo. Uma kunjalo, ungehlisa izindleko zebhizinisi lakho namakhasimende. (Khumbula ukuthi uDisemba 18 ngokusemthethweni lusuku lweNational Shipping Free - ngokungathi sína. Cabanga ngokunikela ngemikhumbi yamahhala ngalolu suku ukuze uhlale uncintisana eduze kwamaholide. Uma uthengisa emhlabeni wonke, qiniseka ukuthi ufaka amanani wokuthumela wamazwe omhlaba kusayithi lakho.
Ukuthinta Okukhethekile - Nikeza ukubingelela okufudumele futhi ukhuthaze noma yimaphi amathuba wokuthengisa ekhasini lakho lokubonga uma amakhasimende efaka i-oda noma ebhalisela incwadi yakho yezindaba. Faka ikhadi ngaphakathi kwebhokisi lokuthumela lapho uthumela amakhasimende i-oda lawo. Uma unesikhathi, yenza inothi elibhalwe ngesandla elinesaphulelo ngaphakathi. Lokhu kuzonikeza amakhasimende akho umuzwa ofudumele, ongacabangi futhi kubakhuthaze ukuthi babuyele okunye!
Ukulandwa kwesitolo - Nikeza inketho yokuthatha esitolo uma unendawo yokuthengisa. Lokhu kuzokongela wena kanye nekhasimende lakho ukheshi kwizindleko zokuthumela ngaphandle.
Ukuhanjiswa Kwamahhala - Cabanga ngokunikeza ukuthunyelwa kwamahhala kwezinto ezibuyisiwe. Ukweba lokhu ngqo encwadini yokudlala yeZappos, kepha kungumbono ofaka ukuzethemba kwamakhasimende ngaphambi kokuchofoza ifayela le- Thenga Manje inkinobho. Cabanga ukunweba isikhathi sokubuyisa ngesikhathi samaholide ukusiza ukunciphisa ikhanda uma amaholide esephelile.
Dala ukuphuthuma - Beka ukubala phansi emakhasini akho okufika nekhasi eliyisiqalo elibonisa ukuthi zingaki izinsuku ezisele kuze kufike amaholide abalulekile. Beka umnqamulajuqu wokuthumela ngqo kumbhalo wakho wesikhangiso se-PPC. Isibonelo, zama okufana, Ukuhanjiswa kwamahhala kuze kudlule (faka usuku)!
Hlobisa - Faka uhlobo oluthile lwedizayini enamaholide ku-logo yakho noma usebenzise umkhankaso wezokuxhumana ocela abalandeli bakho nabalandeli ukuthi bahambise ukwakheka kabusha kwamaholide we logo yenkampani yakho. Eminye imibono ifaka ukulengisa igatsha le-holly kunenye yezinhlamvu noma ukushintsha i-logo yakho ukufaka amalambu kaKhisimusi noma isigqoko sikaSanta. I-Google ikwenza lokhu kaningi emicimbini eyahlukahlukene futhi ingeza ukuthinta, ukuthinta komuntu uqobo kumkhiqizo wakho. Setha usuku njengomnqamulajuqu ukuze izinguquko zakho zokwakheka kweholide zisuswe kusayithi lakho, uqiniseke ukuthi ulondoloza izithombe zakho nekhodi lonyaka ozayo. Awufuni ukuba yilowo makhelwane onamathelayo ongalokothi ehle izibani zakhe.
Enza ngendlela oyifisayo Izincazelo - Jazz up okuqukethwe okuqukethwe izincazelo umkhiqizo wakho. Ngokwesibonelo, Isipho esihle sanoma yimuphi umuntu, ngisho nalabo okunzima ukujabulisa, kukhanga kakhulu kunokufaka kuhlu imininingwane yezobuchwepheshe.
Izipho Zesipho - Dala izigaxa noma obhasikidi bezipho bemikhiqizo yakho bese ubakhela isigaba esithile. Futhi ungabeka lezi zinqwaba kwezinye izigaba osuvele unazo. Khuluma ngokuthengisa okuphambene!
Ukwenza okuthandwa nguwe - Vumela amakhasimende akho ukuthi afake amanothi wesipho ayingqayizivele lapho e-oda. Ungazenza zibeke lokhu kumanothi we-oda noma udale inkambu yangokwezifiso ekhasini lakho lokuphuma lalokho kuthinta okungeziwe. Nikeza izengezo ezenziwe ngezifiso kumikhiqizo yakho, njengokuqoshwa noma ukufekethiswa, uma kufanele.
Buyisa - Zama umkhankaso lapho unikela ngamaphesenti athile wokuthengisa kunhlangano esiza umphakathi, njengoMashi weDimes. Wonke umuntu uyathanda ukubuyisa, ngakho-ke yenza kube lula kumakhasimende akho ukwenza kanjalo.
Amaholide Athengiswayo - Cabanga ngokunikeza ngephromoshini lapho abathengi bethola ikhadi lesipho ngaphezu kwenani elithile le-oda. Isibonelo, uma ikhasimende lisebenzisa u- $ 50, bathola ikhadi lesipho elingu- $ 5. Uma bechitha u- $ 100, ikhadi lesipho elingu- $ 10, njll. Le yindlela enhle yokubuyisela amakhasimende esitolo sakho.
Ukugoqwa kwesipho - Nikeza ukugoqwa kwesipho samahhala noma esincishisiwe ukusiza abathengi ku-pinch. Futhi qiniseka ukuthi ulayisha ephepheni naku-tape!
Izaphulelo Ezikhethekile - Nikeza izaphulelo ezikhethekile ze-Black Friday (usuku ngemuva kwe-Thanksgiving) ne-Cyber ​​Monday (ngoMsombuluko wokuqala ngemuva kwe-Thanksgiving). Lezi zombili izinsuku ezinkulu zokuthengisa online.
Hlela - Zama umkhankaso lapho ufihla khona isithombe esincane sento ethile, njenge-logo yakho, ekujuleni kwelinye lamakhasi akho. Nikeza isipho kunani elithile labasebenzisi abasithola kuqala. Lokhu kuzokhuthaza abantu ukuthi bazulazule kuyo yonke indawo yakho futhi babachaye emikhiqizweni yakho eminingi.
imeyili Marketing - Thumela i-imeyili kuwo wonke amakhasimende akho ngokubingelela okukhethekile okubabonga ngebhizinisi labo. Lokhu kuzobakhumbuza ukuthi bakhokhele isiza sakho lapho befuna izipho. Donsela uhlu lwakho lwezinqola ezilahliwe isonto ngalinye bese uthumela isikhumbuzi kulaba basebenzisi ukuze babuye bazoqedela ukuthenga kwabo. Gqamisa ukubhalisa kwakho kwendaba ukuze wandise inani loxhumana nabo onabo. Khumbula, ukuphinda amakhasimende kushibhile ukuphatha kunokuthola amasha. Ngemuva kokuthi abathengi bathenge okokuqala, bathumele incwajana ekhethekile efaka yonke imikhiqizo yakho ethandwayo futhi efaka isaphulelo sokuthi “ikhasimende elisha”. Akukaze kusheshe kakhulu ukuqala ukwakha ukwethembeka kwamakhasimende.
Ukusekela okubukhoma - Khulisa ukwesekwa kwakho ngokuchitha amahora amaningi engxoxweni ebukhoma nangefoni ukuphendula noma imiphi imibuzo. Nweba ubuwena bomkhiqizo wakho kuzo zonke izindawo zokuthinta zamakhasimende. Uma unesikhungo sezingcingo, qiniseka ukuthi uphendula ucingo ngokubingelela okuphekiwe noma ufake umlayezo onophawu kumodyuli yakho yengxoxo ebukhoma. Ngisho namakhasimende angenelisekile awakwazi ukwenqaba ukufisa okuhle. Jwayela uhlelo lwakho loku-oda ifoni uma ungekho - abanye abantu bakhetha ukungena bangenise i-oda labo ngemuva kokubuza imibuzo embalwa.
Ukukhangisa okukhokhelwayo - Ngesikhathi samaholide, lungisa imikhankaso yakho ye-PPC ukuze ifake amagama asemqoka ahlobene namaholide, anjenge Izipho or izipho. Khuphula ukubhida kwakho kwe-PPC. Amakhasimende angaba khona afuna ukuchitha imali ethe xaxa ukuthola umkhiqizo ophelele, ngakho-ke kufanele uzimisele ukusebenzisa imali ethe xaxa ngokukhuphula isilinganiso sakho sansuku zonke kwi-PPC. Ngokuqhathanisa ukuthenga kukhuphuka, okubhalwe kahle, umbhalo wesikhangiso onamasu ungantshontsha ukuthengiswa kwabancintisana nabo. Hlanganisa umbhalo wakho wesikhangiso se-PPC namagama asemqoka ukukhomba abathengi abafuna imibono yezipho zabathandekayo. Isibonelo, sebenzisa igama elingukhiye elifana nokuthi “izipho zikababa” elinekhophi yesikhangiso efaka iziphakamiso ezinjengokuthi, "Sinezipho zeholide zamadoda afana newashi, amagilavu ​​egalofu kanye nothayi okokuncane."
Ukucinga Engines - Phinda uthumele imephu yakho yesayithi kungekudala kunemikhiqizo nezigaba ezintsha ukuze izinjini zokusesha zikwazi ukuzikhomba nokuzibeka ngaphambi kokuba kuqale isizini yokuthengisa. Qinisa futhi ulungise izincazelo ze-meta ezigabeni nemikhiqizo ethandwayo ukufaka amagama asemqoka azosiza izinga lekhasi lesigaba sakho namakhasi womkhiqizo. Lungisa isihloko sakho sekhasi eliyisiqalo kanye / noma ukopishe ukukhombisa abathengi ukuthi uyindawo efanelekile yokuthenga izipho, uqiniseke ukuthi ufaka amagama asemqoka afanayo njengakuqala ukuze ungalahleki emazingeni akho akhona.
Bandakanya Imidiya Yezokuxhumana - Hlela kabusha iziteshi zakho zokuxhumana nabantu, njenge-Twitter ne-Facebook, ukuze zihlukane futhi zifakwe uphawu. Yabelana ngezaphulelo zakho bese uqokomisa imikhiqizo efakiwe nsuku zonke ngemithombo yezokuxhumana - lokhu kudala umuzwa wokuphuthuma futhi kusiza ukunweba ukufinyelela kwakho ku-inthanethi. Zama umkhankaso wezokuxhumana lapho ucela amakhasimende ukuthi athumele amavidiyo, izithombe noma izincwadi zokuthi kungani ejabulela imikhiqizo yakho nebhizinisi lakho. Nikeza abaphendulayo isaphulelo kumkhiqizo abazikhethele wona, bese usebenzisa izingcaphuno zabo nezithombe kuwebhusayithi yakho. Khumbula, ubufakazi bukhulu kakhulu! Zama i-poll eziteshini zakho zokuxhumana, ubuze, "Uma ungaba nento eyodwa kusuka (faka igama lesitolo sakho), kungaba yini?" Bese ulandela ngokunikeza abaphendulayo isaphulelo kumkhiqizo abawukhulume!
Landa lonke uhlu lukaVolusion Izeluleko eziyi-101 ze-Ecommerce zokukhuthaza ukuThengiswa kwamaholide!
Qaphela: Sifake isixhumanisi sethu sokusebenzisana neVolusion kuso sonke lesi sihloko. IVolusion yisisombululo esihamba phambili se-ecommerce yamabhizinisi amancane kuya kwaphakathi. Kusukela ngo-1999, izinkampani eziyizinkulungwane zisebenzise iVolusion ukuze ziphumelele ku-inthanethi, umthengisi ojwayelekile athengisa umncintiswano, 3: 1.
Tags: imeyili ye-ecommerceukumaketha kwe-imeyili kwe-ecommerceukwenziwa kwe-ecommerceamakhadi wesipho se-ecommerceukwesekwa bukhoma kwe-ecommerceukuthengiswa kwe-ecommerceamasu okusesha we-ecommerceecommerce imithombo yezokuxhumanaamasu e-ecommerceukwenza ngezifiso isiphoamasu e-ecommerce wamaholideamaholide ecommerce upsellsamasu amaholideukuqhuma
Nov 4, 2013 ngo-3: 02 AM
Ngicabanga ukuthi lawa masu angaba ngcono uma ufuna ukwandisa ukuthengisa kwakho kwamaholide. Ngokuqinisekile kuzosiza kulabo abasebenzisa izingosi zamaholide.